China Muviri-weMubatanidzwa-Musangano-Manifold-Sanganisa-Jigs-Rongedza-Solution fekitori uye vagadziri | Weldo
CNC azvikuya zvikamu
CNC kutendeuka zvikamu
CNC aluminium zvikamu
CNC yendarira chikamu
Cnc simbi dzesimbi zvikamu
Machine gungano, yechigarire gungano
Mushure mekupedza kugadzirisa kweese cnc machining zvikamu, kana zvichidikanwa, isu tinogona kupa musangano masevhisi emachina, zvigadziriso, zvinotsigira zvikamu, nezvimwe zvichibva pagungano dhizaini zvinopihwa nevatengi. Batsira vatengi kuchengetedza nguva, chengetedza basa, uye chengetedza kunetseka.
1: Kugadzira cnc machine zvikamu maererano nekugadzirisa dhizaini.
2: Pedzisa pamusoro penzvimbo.
3: Zvinoenderana nekuunganidza vanodhirowa pakuunganidza zvikamu zvevatengi.
Tumira neindaneti kwatiri pasi mutoro kune pdf
Tine tekinoroji yedu yekutungamira zvakare semweya wedu wehunyanzvi, kubatirana pamwe, mabhenefiti uye kufambira mberi, isu tichavaka ramangwana rakabudirira pamwe nesangano rinoremekedzwa reChina OEM China OEM Kugaya Kuchenesa Lathe Zvikamu Kugadzirisa Zvakasarudzika CNC Machining Chikamu, Makore mazhinji ehupenyu ruzivo, takaona kukosha kwekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakanakisa pamberi-pekutengesa uye nemashure-ekutengesa masevhisi.
Kambani yedu inoona "mitengo inonzwisisika, mhando yepamusoro, inoshanda nguva yekugadzira uye yakanaka mushure mekutengesa sevhisi" seyakagadzwa yedu. Isu tinotarisira kushandira pamwe nevamwe vatengi kwekudyidzana kukura uye mabhenefiti mune ramangwana. Welcome to nesu.
Kambani yedu kubva payakatanga, kazhinji inoona chigadzirwa chemhando yepamusoro sehupenyu hwekambani, inogara ichisimudzira tekinoroji yekugadzira, inowedzera chigadzirwa chakanakisa uye ichienderera ichisimbisa kambani yakazara kwazvo manejimendi. Yekuwedzera bhizinesi, iyo trust iri kusvika ipapo. Yedu yakasimba kazhinji kubasa kwako chero nguva.
Yakanaka Hunhu China CNC Zvikamu, Mashini Zvikamu, Kambani yedu inotsigira mweya we "hunyanzvi, kuwirirana, timu basa uye kugovana, nzira, pragmatic kufambira mberi". Tipei mukana uye isu tichaenda kuratidza kugona kwedu. Nerubatsiro rwemutsa wako, tinotenda kuti tinogona kugadzira ramangwana rakajeka newe pamwe chete
Kuunganidza mifananidzo yakapihwa nevatengi inofanirwa kujekesa muPDF fomu.
Q1: Ndingawane kupi ruzivo rwechigadzirwa & mutengo?
A1: Titumirei kubvunza e-mail, isu tinosangana newe apo isu tichigamuchira tsamba yako.
Q2: Ndingawana nguva yakadii kuwana muyenzaniso?
A2: Zvinoenderana nezvinhu zvako chaizvo, mukati memazuva manomwe zvinodiwa kazhinji.
Q3: Ndeapi mhando yeruzivo iwe yaunoda kuti utore?
A3: Nomutsa ndapota ipa chigadzirwa kudhirowa muPDF, uye uchave zvirinani iwe unogona provde mu STEP kana IGS
Q4: ndeapi mazwi ekubhadhara?
A4: Tinogamuchira 50% semubhadharo wekubhadhara, kana zvinhu zvapera, isu tinotora mafoto echeki yako uye iwe wozobhadhara iyo bhezari.Kune zvishoma, isu tinogamuchira Paypal, Paypal Commission ichawedzerwa kune iyo odha. Pamari hombe, T / T inosarudzwa
Q5: Sei kuendesa nhumbi?
A5: Isu tinonunura zvigadzirwa nekambani yekutakura kana zvinoenderana nezvamunoda
Q6.Iwe uri kambani yekutengesa kana fekitori?
A6: Isu takananga fekitori ine vanopfuura gumi vane ruzivo mainjiniya uye vanopfuura vashandi ve40 pamwe nekufungidzira 2,000 mativi emamirimita emusangano nzvimbo.
Pashure: Fekitori inogadzira Cnc Kugadzira Services - Yakakwira Precision Tsika Yakagadzirwa CNC Kugadzira CNC Yakagadzirwa nendarira Zvikamu - Weldo
Iyo kambani inogona kuenderera pamwe neshanduko mune ino indasitiri musika, zvigadzirwa zvinogadziridza nekukurumidza uye mutengo wakachipa, uku ndiko kubatana kwedu kwechipiri, zvakanaka.
NaKaren anobva kuDubai - 2018.02.12 14:52
Kuendesa panguva yakakodzera, kumisikidza kuisirwa kwechibvumirano gadziriro yezvinhu, zvakasangana nemamiriro ezvinhu akasarudzika, asi zvakare kushandira pamwe, kambani yakavimbika!
NaRenata wekuIndonesia - 2017.06.16 18:23
Unoda kuziva zvakawanda?
Kwete 16, Dalong Road, Shigu Maindasitiri Zone, Nancheng Dunhu, Dongguan Guta, Guangdong Province, China
Titevere pane aya masocial network.
© © Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved.